Midabka cas ee Coral wuxuu siinayaa rafcaan ku saabsan silsilad iyo waxyaabo kale oo dahab ah - muuqaal
Koofiyadaha midabbo badan leh waxay siinayaan rafcaan ku saabsan silsilado qoorta iyo waxyaabo kale oo dahab ah. Corally coral gaduudan waxaa loo qiimeeyaa dhagxaan qaali ah. Mararka qaarkood waxaa loo yaqaan "Coral dabka", lamana mid noqoto ruushka dabka. Coral cas waa dhif iyo naadir sababta oo ah dulsaar badan. Isku soo wada duuboo, waa lama huraan in lagu bixiyo coral hadiyado maadaama ay hoos ugu dhacayaan culeyska sida isbedelka cimilada, wasakheynta, iyo kalluumeysiga aan la heli karin.
Had iyo jeer waxaa loo arkaa macdan qaali ah, Shiineysku waxay leeyihiin xiriir casaan dheer oo casri ah oo ay weheliso xasillooni iyo cimri dheeri sababtoo ah midabkeeda iyo sida ay ugu egtahay deerada, marka waa urur, wanaag, cimri dheer, iyo darajo sare. Waxay gaartay heerkeedii caanka ahaa xilligii Manchu ama Qing Dynular (1644-1911) markii ay u dhowdahay in loogu talagalay in loo adeegsado boqorka amaba qaab kabadal ah oo loogu talagalay dahabka maxkamadda ama geedaha macdanta yaryar ee qurxinta. Waxaa loo yaqaanay shanhu Shiinaha. Shabakad dhuxul-casri ah oo hore ayuu badda Badda Dhexe ilaa Qing Shiinaha u sii mariyey Shirkadda Ingriiska Bariga India. Waxaa jiray sharciyo adag oo la xiriira adeegsiga koodh uu aasaasay Amiirka Qianlong 1759.
Waa maxay Coral?
Dareemayaashu waa marin biyoodka gudaha fasalka Anthozoa ee phylum Cnidaria. Caadi ahaan waxay ku nool yihiin deegaanno isku dhafan oo polyps shaqsiyeed isku mid ah. Noocyada dhuxusha ayaa waxaa ka mid ah kuwa wax dhisa ee loo yaqaan 'reef Reef' oo deggen badda kuleylaha ah iyo kaarboonka kaalshiyamka ah si ay u sameeyaan qalfoof adag.
Kooxda coral waa gumeysi noocyo badan leh oo isku mid ah Polyp kasta waa xayawaan sida sac oo kale ah kaliya dhawr milimitir oo dhexroor ah iyo xoogaa sentimitir dherer ah. Dhowr arimood ayaa ku wareegsan furitaanka afka dhexe. Exoskeleton ayaa laga soo ban dhigay agagaarka salka. Qarniyo badan, gumaystaha ayaa markaa abuuraya astaamo weyn oo lafaha oo ka mid ah noocyada. Madaxa shaqsiyadu waxay ku koraan dhalmada galmada burooyinka. Waxa kale oo ay u galmoodaan galmada iyada oo la duudsiyo: burooyin isku nooc ah oo isku mid ah ayaa sii daaya gametes isku mar ah muddo ah hal ama dhowr habeen hareeraha bisha buuxda.
In kasta oo dhuxullada qaarkood ay awoodaan inay ku qabtaan kalluunka yar yar iyo plankton iyagoo adeegsanaya unugyo ku xanniban alwaaxdooda, haddana dhagxaanta badankood waxay ka helaan inteeda badan tamarteeda iyo nafaqada ay ka helaan dinoflagellates photosynthetic unicellular dinoflagellates ee kujira hidde-wadaha Symbiodinium ee ku dhex nool unugyadooda. Kuwaani waxaa badanaa loo yaqaanaa zooxanthellae. Noocan oo kale ah waxay u baahan tahay iftiinka qorraxda oo ku koraan biyo cad, qoto dheer, gaar ahaan qoto dheer oo ka hooseeya 60 mitir. Dhuxulada ayaa qayb weyn ka qaata qaabdhismeedka jireed ee dhuxusha biraha ee ku soo kordha biyaha kuleylaha iyo biyaha ka hooseeya, sida Great Barrier Reef ee xeebta Queensland, Australia.
Daawada, xeryahooda kiimikada ah ee ka yimaada waxaa loo isticmaali karaa daaweynta kansarka, AIDS, xanuunka, iyo adeegsiga kale ee daweynta. Lafaha murqaha, tusaale ahaan Isididae waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lafaha lagu kala qaado aadanaha. Coral Calx, oo loo yaqaan Praval Bhasma oo kuyaal Sanskrit, ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa nidaamka dhaqameed ee daawada Hindiya iyadoo lagu daro daaweynta daweynta xanuunnada dheef-shiid kiimikaad ee kala duwan ee la xiriira yaraanta kaalshiyamka. Waqtiyada qadiimiga ah ee qulqulka qalliinka, kaas oo inta badan ka kooban karboonka kaalshiyamka ah ee tabarta daran, waxaa lagula taliyay inuu dejiyo boogaha caloosha ee Galen iyo Dioscorides.
Coral ka yimid Tuniisiya
Ka iibso duub si dabiici ah dukaankeena
Waxaan ku samaynaa dahabka loo yaqaan 'coral' oo leh coral sida giraan, hilqado dhejisyo ah, jijin, silsilad ama pendant.
Tags Coral, lafo